သကျတနျ့ခြို: February 2012
ဒီတဂ်ပို့စ်လေးရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ အခုဆို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ငါးထောင် တန် ဖုန်းထုတ်ပေးမယ့် ကုမ္မဏီနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတို့ အပြိုင်အ ဆိုင် ကြေငြာချက်တွေလာပြီးတဲ့အနောက်မှာ အခုဆို သွေးအေးသွားသလိုဖြစ်နေခဲ့ရတယ် ။
တစ်ဦးအားနဲ့မစွမ်းသာ စုပေါင်းကူညီပါဆိုတဲ့အတိုင်း မြစ်ဆုံအရေးတုန်းကလို ဘလော့ဂါတွေ စုပေါင်းပြီး ကျွန်တော် တို့ ငါးထောင်တန်ဖုန်း ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါစို့လား ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြော ချင်တာကတော့ အခု တဂ်ပို့စည် ရွှေပြည်တံခွန်နဲ့လည်းမဆိုင် ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လည်းမဆိုင်ပဲ ပြည်သူတွေထဲက ပြည်သူဘလော့ဂါ တစ်ယောက်အနေနဲ့ရိုးရိုးသားသား တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေ ချထားလို့ တောင်းဆိုတဲ့သဘောပါပဲ ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ တရားသေမပြောစေချင်ပါဘူး ။ နိုင်ငံတကာမှာ ဒီဈေးနဲ့ ရတဲ့အတွက် ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင် ပါတယ် ။ အခုဆို အားလုံးသိနေကြပြီပဲ တချိန်က သိန်း ၃၀ ၊ ၄၀ လောက်ပေးဝယ်ခဲ့ကြရတဲ့ ဆင်းကဒ်တစ်ခုဟာ အဲဒီအ ချိန် တခြားအိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် ငါးထောင်ထက်မပိုတဲ့ဈေးနဲ့ရနေခဲ့ပြီ ။ အ တိတ်တွေ ကို ထားခဲ့ပါတော့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ တော့ တန်ဖိုးနည်းဖုန်း ဟာအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ဖြစ်ကိုဖြစ် လာ သင့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ကဲ တဂ်ပို့စ်လေးစပါပြီ ။ အောက်မှာ မေးခွန်းလေးတွေမေးထားပါတယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ကူ ညီပြီးဖြေပေး ကြပါဦးခင်ဗျာ ။ ကျွန်တော့်အဖြေလေးတွေလည်း ဖြေပေးထားပါတယ် ။
- ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ မရယ်ရတဲ့ ဟာသတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရသလိုပါပဲ ၂ သိန်းဆိုတာ တန်ဖိုးနည်းပါ့မလား အခြေခံလက်လုပ်လက်စား ဘ၀တွေအတွက်တော့ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ ။
- အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် လုပ်နိုင်သူတွေကိုလည်း အားပေးပါတယ် ဆက်လက်ပြီး လုပ်ကြဖို့လည်း တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ် ။
၃ ။ ငါးထောင်တန်ဖုန်းပေါ်လာစေဖို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခြင်းအပေါ် သင်ဘယ်လိုမြင် မိပါ သလဲ ။
ဒါဟာလည်း ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ယူဆမိပါတယ် ။
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ငါးထောင်တန်သာမကဘူး အခုဆိုရင် ဆင်းကဒ်အလ ကားပေး မယ့် ကုမ္မဏီတွေတောင် ရှိတယ်လို့ ပြောသံတွေကြားရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလို တန်ဖိုးနည်းဖုန်းပေါ်ပေါက်လာမှာကိုတော့ကြိုဆိုပါတယ် ။
၅ ။ ငါးထောင်တန် ဖုန်းအပေါ် သင့်အမြင်လေး ချရေးပေးပါ ။
သတင်းအချက်အလက်တွေ ယိုစီး ပြန့်ကျဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အရာရာဟာ အမှန်နဲ့အ မှား ရောထွေး လို့နေပါ တယ် ။ တလောကလည်း ရွှေပြည်တံခွန်က လွင်နိုင်ဦးဟာအ ခြေအမြစ်မရှိဘူး ဘာညာနဲ့ စာတွေ ဖေ့ ဘုတ်ပေါ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် ။ ဒီတော့ လွင်နိုင်ဦးကို ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ သူတို့ကို ကြောတယ် ( သူတို့အရင်လမ်း ဖွင့်ပေးရမှာကို မဖွင့်ပဲ လွင်နိုင်ဦးက အရင် တန်ဖိုးနည်းဖုန်း တွေချပေးမယ်ပြောခြင်း ) အပေါ် စိတ်ခုတယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့လုပ်ပြလိုက်ပါ ။ ဒါပေမယ့် ၂ သိန်းတန်ဖုန်းကိုတော့ ကျေးဇူးပြုပြီး တန်ဖိုး နည်းဖုန်းလို့မပြောပါနဲ့ ။ ဘယ်လိုမှ တန်ဖိုးမနည်းပါဘူး တန်ဖိုးကြီးဖုန်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေး တို့ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက်အသက် သာဆုံး ဖုန်းတွေ သုံးလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ် ။
ဒါဟာ အခြေခံ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ် ။ အကယ်၍ ဆက် သွယ်ရေး တာဝါတိုင်တွေနဲ့ တခြားအရာတွေအတွက် budget မလောက်ဘူးဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေကို ရသုံးငွေစာ ရင်းကို အတိအလင်းထုတ်ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ ။ ပြည်သူတွေ ထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းလို တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းတွေပေါ်ပေါက် လာစေဖို့ သွေးမအေးပဲ ဆက်လက်တောင်းဆို သွားဦးမှာပါ ။
ဒီ မေးခွန်းငါးခုလေးနဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးကို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂါအချို့ကို ဆက်ပြီးတဂ်လိုက်ပါတယ် ။ အတဂ် ခံရတဲ့ ဘလော့ဂါများအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ ခင်ရာမင်ရာ သူငယ်ချင်းတွေကို ဆက်လက်တဂ်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ။
၁ ။ ဆရာမ ရွှေစင်ဦး
၂ ။ မနိုင်း ( နိုင်းနိုင်းစနေ )
၃ ။ ကိုဇော်
၄ ။ မနမ်းမ၀ (အဖြူရောင်နတ်သမီး )
၅ ။ မ မိုးငွေ့
၆ ။ မ နန်းဝါ၀ါမောင်
၇ ။ ကိုကြီး ( Multiply)
၈ ။ သဒ္ဓါလှိုင်း
၉ ။ ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ )
၁၀ ။ မချော (ချောအစိမ်းအရောင်လွင်ပြင်)
၁၁ ။ အန်တီတင့်
၁၂ ။ သက်ဝေ
၁၃ ။ မဒိုးကန် (မဒမ်ကိုး)
၁၄ ။ ကိုပီတာ (ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ )
၁၅ ။ အိန်ဂျယ်လှိုင်
၁၆ ။ အလင်းသစ်
၁၇ ။ မိုးယံ
၁၇ ယောက်ကိုတ ဂ်လိုက်ပါတယ် ။ အချင်းချင်းလည်းဆက်လက်တ ဂ်သွားပြီး ငါးထောင်တန်ဖုန်း အကြောင်းလေး သွေး မအေးကြရအောင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြပါစို့ ။
( စာရေးပျင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို များများတဂ်ကြနော် :)
Posted by သက်တန့်ချို at 10:09 AM 25 comments:
ပေါင်းလောင်းမြစ်အရှေ့တွင် တပည့်များနှင့်အမှတ်တရ ။
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ပူပြင်းတဲ့အရှိန်က တမြေ့မြေ့ လောင်ကျွမ်းတောက်လောင်လျှက်ရှိပါတယ် ။ ဒီတစ်ခေါက် လည်း ကိုသက်တန့်တစ်ယောက် ထမ်စမ်းဂူသွားပြီးကတည်းက ခရီးမထွက်ဖြစ်လိုက်တာ အခုမှပဲ နေပြည်တော် ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့တစ်ခေါက်ရောက်သွားပြန်ပါတယ် ။ နေပြည်တော် ရုံးခွဲက တပည့်တွေရဲ့ကောင်း မှုနဲ့ ရောက် တဲ့အချိန် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်ကလေးမှာ ရေပန်းဥယျဉ်ကိုတစ်ခေါက် ၀င်လည်ခဲ့ပါတယ် ။ ရေပန်းဥယျာဉ် မသွား ခင် ညနေပိုင်းက နေပြည်တော် ရှိ ပေါင်းလောင်းမြစ်ကို ခဏသွားခဲ့ပါသေးတယ် ။
ရေတောင်ဆင်းကူးလိုက်ချင်တာ ( အ၀တ်အစားအပိုမပါခဲ့လို့ :P)
နဂိုကတည်းက ဓါတ်ပုံရိုက်ဝါသနာထုံသူမို့ အတော်များများရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အ၀င်အ၀မှာပဲ ခမ်းနားတဲ့ မုဒ်ဦးကြီး က ဆီးလို့ကြိုနေပါတယ် ။ ၀င်ရတာ တောင်နည်းနည်းရှိန်တိန်တိန်မို့ အပေါက်တွေမှားကုန်ရော ဒါနဲ့ အထဲရောက်တော့ တီတီတီဆိုတဲ့ လုံခြုံလေးအချောင်းလေးနဲ့ စစ်ပါသေးတယ် ။ ကင်မရာကိုတွေ့သွားတော့ အခွန်ဆောင်ပါ ၁၀၀၀ ကျပ်ပါတဲ့ ။ အင်း ဓါတ်ပုံက မရိုက်လို့လည်းမဖြစ်တော့ အခွန် ဆောင်လိုက်ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ နေပြည်တော်ရဲ့ ခမ်းနားလှပတဲ့ ရေပန်းဥယျဉ်ကြီးထဲ တစ်ခေါက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ ။
နည်းနည်းမှောင်သွားတယ် ကောင်းပါတယ်လေ မမြင်ရလေ ကောင်းလေးပဲ ဟီးဟီး
ဒီတံတားလေးလှတယ် ရေတံခွန်ကိုသွားရတဲ့တံတားလေးပေါ့ ညဖက်ဆိုတော့ Romantic ပဲ ဒါပေမယ့် အနီးကပ် အပြာတန်းလေးတွေ ကို ကြည့်လိုက်ရင် ပင့်ကူအိမ်တွေအများကြီးပဲ အဲဒါလေးတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ရှင်းပေး ရင်ကောင်းမယ် ။
ဒါက ရေတံခွန်ကိုသွားတဲ့ လမ်းပါ ။
ဂူအ၀င်အ၀ကို ၀င်တဲ့အပေါက် ။
View လေးကောင်းမယ်ထင်လို့ ရိုက်ခဲ့တယ် ။
ရေက တအားပက်လွန်းတော့ လုံးဝကို ဆက်ရိုက်လို့မရတာနဲ့ ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ် ။
ကျောက်လွှာတွေကနေစီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်တွေ ။
ရေဘ၀ဲရုပ်ပါ မီးတော့မထွန်းထားပါဘူး ပိတ်ခါနီးမို့ထင်ပါတယ် ။
ခမ်းနာလှပတဲ့ ရေပန်းဥယျာဉ်ကြီးကို တစ်ခေါက် အလည်ရောက်သွားခဲ့ရတာ တစ်သက်မမေ့နိုင်စရာပါပဲ ။ နေပြည်တော် လို ခမ်းနားတဲ့နေရာမျိုးတွေ နေရာအနှံ့ မြန်မာပြည်တလွှားမှာလည်းပေါ်ထွန်းစေချင်ပါတယ်လို့ ဆုတောင်းပြုရင်း အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:31 PM 15 comments:
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း, တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးတွေ
အရုပ်တစ်ရုပ် နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့် နဲ့ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်အဖြစ်လေးတစ်ခု
အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါပဲ - - - ။
ကျွန်တော် စတိုင်းဆိုင်တစ်ခုမှာ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ ။ အသက် ၅ နှစ်လောက်ပဲရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ဦးကို အရောင်းစာရေးမလေးက ပြောနေတာကို မြင်ခဲ့တယ် ။ အရောင်းစာ ရေးမ လေးကပြောတယ် ။
“ စိတ်မကောင်းပါဘူးကလေးရယ် မင်းမှာ ဒီအရုပ်လေးကို ၀ယ်ဖို့ ငွေမလောက်ဘူးလေ ”
အဲဒီတော့ ကောင်လေးက ကျွန်တော့်ကြည့်နေတာကိုမြင်သွားပြီး ကျွန်တော့်ကို မေးတယ် ။ “ ဦးဦး ကျွန်တော့်မှာ ငွေမ လုံလောက်ဘူးဆိုတာ သေချာလားဟင် ”
ကျွန်တော်သူ့ငွေတွေကိုရေတွက်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောခဲ့တယ် ။ “ အင်းဟုတ်တယ် ကောင်လေး မင်းမှာ ဒီအရုပ်လေး ၀ယ်ဖို့ ငွေမလုံလောက်ဘူးလေ ” ကောင်လေးဟာ သူ့လက်ထဲမှာ အရုပ်ကလေးကိုဆက်ပြီးကိုင်ထားတုန်းပါပဲ ။ နောက် ဆုံး ကျွန်တော်သူ့နားသွားပြီး သူ့ကိုမေးခဲ့တယ် ။ အဲဒီအရုပ်ကလေးက ဘယ်သူ့ကိုဝယ်ပြီးပေးမလို့လဲ ဆို တာကိုပေ့ါ ။
“ ဒီအရုပ်ကလေးက ကျွန်တော့် အစ်မ သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အရုပ်ကလေးပါ သူအရမ်းလိုချင်နေခဲ့တယ် သူ့မွေးနေ့ အတွက် ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသူ့ကိုပေးချင်လို့ပါ ဦးဦး”
“ ဒီအရုပ်ကလေးကို ၀ယ်ပြီး အမေ့ကို ပေးလိုက်မယ် အဲဒီအခါ အမေက နေ အစ်မဆီသွားတဲ့အခါ အဲဒီအ ရုပ်က လေးကို ပေးနိုင်မှာပါ ” သူ့မျက်လုံးထဲမှာ အလွန် ၀မ်းနည်းနေတဲ့အရိပ်အယောင်တွေနဲ့ စကားကိုဖြည်း ဖြည်းချင်း ပြောတယ် ။
“ တကယ်တော့ အစ်မ က ကောင်းကင်ဘုံမှာပါ အဖေက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် အမေလည်း မကြာခင်မှာ ကောင်းကင်ဘုံမှာ အစ်မ ကိုသွားပြီး တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ ဒါကြောင့် အစ်မဆီကို အမေနဲ့အတူ ကျွန်တော် ဒီအရုပ်ကလေးကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ ”
ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံဟာ ရပ်တန့်သွားမတတ်ပါပဲ ။ ဒီအသက် ၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးက ကျွန်တော့် ကိုစိုက်ကြည့် ပြီးဆက်ပြောတယ် ။ “ ကျွန်တော်အဖေ့ကိုပြောပါတယ် အမေ့ကို မသွားဖို့ တားပေးဖို့အတွက်ပေါ့ ကျွန်တော်အခု အရုပ်ဝယ်ပြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်ထိ အမေ့ကို စောင့်နေစေချင်တယ်လေ ” ပြီးတော့ ကောင် လေးက သူရယ်မောနေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကို ကျွန်တော့်ကို ထုတ်ပြတယ် ။
“ ကျွန်တော် ဒီပုံလေးကို အမေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ် အမကျွန်တော့်ကို မမေ့သွားအောင်ပေါ့ ဒါပေမယ့် အဖေက ပြောတယ် သားမေမေဟာ သားမမ နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားတွေ့ရတော့မယ်တဲ့ ” ကောင်လေးဟာ ရီေ၀၀မ်းနည်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လက်ထဲက အရုပ်ကလေးကို စိုက်ကြည့်ရင်းပြောနေတယ် ။
ကျွန်တော် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုချက်ချင်း ဆွဲထုတ်ပြီးကလေးကိုပြောလိုက်တယ် ။ “ ငါတုိ့နောက်တစ်ခါ ပြန်စစ်ရ အောင်အရုပ်အတွက် လုံလောက်တဲ့ ပိုက်ဆံ ရှိချင်ရှိနေမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလားကလေးရဲ့ ”
“ ကောင်းပါပြီ ” လို့ ကောင်လေးကပြောတယ် ။ “ ငွေပြည့်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေပါ့မယ် ” ကျွန်တော် သူမမြင် တွေ့ခင်မှာပဲ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကငွေအချို့ကို အမြန်ထုတ်ယူပြီးကောင်လေးငွေတွေကို စတင်ရေ တွက်ခဲ့ တယ် ။ အရုပ်အတွက် ငွေက လုံလောက်ယုံတင်မကပါဘူး ပိုတောင်ပိုလို့နေပါသေးတယ် ။
ကောင်လေးကပြောတယ် “ ကျွန်တော့်ကို လုံလောက်တဲ့ငွေတွေပေးတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူး တင်ပါ တယ် ” တဲ့ ။
“ ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ညက မအိပ်ခင် ဘုရားသခင်ကိုပြောခဲ့တယ် အမကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်ဖို့အတွက် လုံလောက် တဲ့ ငွေလိုချင်ပါတယ်လို့ အခု သူကြားသွားသလားမသိဘူးနော် ! ”
“ ကျွန်တော် အမေ့အတွက်လည်း နှင်းဆီအဖြူလေးတစ်ပွင့်လောက် ၀ယ်ပေးချင်ပါတယ် -- ဘုရားသခင်ဆီမှာ ကျွန်တော်အ များကြီးမတောင်းရဲတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူက ကျွန်တော့်ကို အရုပ်တစ်ရုပ်နဲ့ နှင်းဆီအဖြူ တစ်ပွင့် အတွက် လုံလောက်တဲ့ငွေကိုပေးခဲ့တယ်လေ မေမေက နှင်းဆီဖြူလေးတွေကိုချစ်တယ် ”
ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ပြီးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်စိတ်အခြေအနေက လုံးဝကွဲပြားခြားနားသွားပါပြီ ကျွန်တော် ကောင်လေး ကို စိတ်ထဲကနေ လုံးဝမမေ့နိုင်ခဲ့ဘူး ။ အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက် က သတင်းစာထဲက သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွားပြီးသတိရမိလိုက်တယ် ။ အရက်မူးသမား တစ်ဦး မောင်းလာ တဲ့ကားတစ် စီးက အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ကောင်မလေးငယ်တစ်ဦးကို တိုက်မိပြီး ကောင်မလေးကတော့ နေရာတင်ပဲ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းပေါ့ ။ အမျိုးသမီးကတော့ အရေးပေါ်ကုသမှုနဲ့ ဆေးရုံမှာ ရောက်နေ တဲ့အကြောင်း ။ နောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံး သူ့မိသားစုက အသက်ကို ဆွဲဆန့်ထား ရတဲ့အသက်ကယ်စက်တွေကို ဖြုတ်ပစ်ဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အမျိုးသမီးဟာ Coma လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ကြာကြာ သတိလစ်မေ့မျောခြင်းကနေ ပြန်လည် အသက်ရှင် သန်လာနိုင်မှု မရှိတော့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟင် ဒါဆို ဒီကောင်လေးဟာ အဲဒီမိသားစုက ကောင်လေး များဖြစ်နေမလား ?
ကောင်လေးနဲ့ ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ၂ ရက်မြောက် နေ့မှာပေါ့ ။ ကျွန်တော် သတင်းစာမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ ။ ဆေးရုံပေါ်က အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း -----။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် နှင်းဆီ ဖြူ အစည်းတွေဝယ်ပြီး နာရေးအိမ်ကို လိုက်သွားခဲ့ တယ် ။ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူ့ဖခင်တို့ဟာ အမျိုးသမီးနဲ့ မိန်းကလေး ငယ်လေးတို့အတွက် မမြုပ်နှံခင် နောက်ဆုံးဆုတောင်းစကားတွေပေးဖို့ -- လူတွေကြည့်ဖို့ စောင့်နေပါတယ် ။ အမျိုးသမီးကိုထည့်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားထဲမှာတော့ အမျိုးသမီးရင်ဘတ်ပေါ်မှာ နှင်းဆီပွင့်လေးတစ်ပွင့် နဲ့ ရယ်မောနေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဓါတ်ပုံကို တင်ထားပါတယ် ။ ဘေးနားက ကောင်မလေးရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတော့ အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်တင်ထားပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဆက်ပြီး ကြည့်ဖို့ ခွန်အားမရှိတော့ပါဘူး ။ မျက်ရည်တွေနဲ့ ကျွန်တော် အဲဒီနေရာကနေ ထွက်ခွာလာခဲ့တယ် ။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ ကျွန်တော် ဘ၀ဟာ ပြောင်းလဲသွား ခဲ့ပါ တယ် ----။
ကောင်လေးရဲ့ သူ့အမေနဲ့သူ့အမ အပေါ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဟာ ပုံဖော်ပြဖို့တောင် ခက်ခဲလွန်း လှပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲ အမူးသမားတစ်ဦးက သူ့ကို သူ့မိဘ ၊ သူ့အမ တွေနဲ့ ခွဲခွာစေ ပြီး အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ် ။
ေ ကျးဇူးပြုပြီး- - - -
“ အရက်သောက်ပြီး ကားမမောင်းကြပါနဲ့ ”
အခု ခင်ဗျားမှာ ရွေးချယ်စရာ ၂ ခုရှိပါတယ် ။
- ဒီစာလေးနဲ့ မက်ဆေ့လေးကို သူငယ်ချင်းတွေဆီမျှဝေပေးပါ Share လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အရက် သောက်ပြီးကားမမောင်းကြပါနဲ့ လို့ ပြောဖြစ်အောင်ပြောပေးကြပါ ။
- သင့် နှလုံးသားကို ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက မထိ စေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သင်မေ့လိုက်ပါ ။
“ ယောက်ျားတစ်ယောက် မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူ/သူမ ဘာတွေ ပေးဆပ်နိုင် သလဲဆို တဲ့အပေါ်မူတည်တယ် -- သူ/သူမ ဘာတွေ လက်ခံနိုင်သလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး ”
Do not drink and drive အား ဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
( ကျွန်တော်ဒီစာလေးဘာသာပြန်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ အကြာကြီး ထိုင်နေမိတယ် -- စိတ်မကောင်း ပါဘူး ကောင်လေးရယ် -- ငါတို့လည်းတစ်နေ့ လိုက်သွားကြရမှာပါ အဲဒီအခါ မင်းရယ် မင်း အမေ ရယ် မင်း မမ ရယ် မင်းတို့မိသားစုလေး ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစေလို့ ဦးဦး ဒီနေရာကနေ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ ----)
Posted by သက်တန့်ချို at 12:03 PM 11 comments:
မျိုးအောင်ထားတဲ့ ဘဲသန္ဓေသားကို balut လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ရေပူထဲမှာ သူတို့ကို ထည့်ပြုတ်ထားကြပေမယ့် အသက်ရှင် သန်နေတုန်းပါပဲ ။ ဒီလို မျိုးအောင်ပြီးအကောင်ပေါက်လုနီးနီး ဘဲဥ တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတချို့က လမ်းဘေး ဆိုင်တွေမှာတော့ ပရိုတိန်းပြည့်ဝခြင်း ၊ စားသောက်ကောင်းတဲ့ လမ်းဘေးစာဖြစ်ခြင်း ကြောင့် balut တွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူတော်တော်များများစားသုံးနေကြတာဟာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို ဖြစ်လို့နေ ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ အတော်လေးကို ရောင်းကောင်းပြီး ၀ယ်စားသူလည်းများပါတယ် ။ ဒီဘဲသန္ဓေသားပေါက်ကိုစားတဲ့ သူတွေဟာ ဆား ၊ ငရုတ်ဆီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ဗီနီဂါ တွေရောစပ်ပြီး အချဉ်အဖြစ် တွဲဖက်စားသုံးကြပါတယ် ။
ဒီဥ တွေရဲ့ ဘေးမှာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေကို အလွန်ပဲ မွှေးပျံ့တဲ့ရနံ့ ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲံအတွက် အထဲမှာရှိတဲ့ ဘဲသန္ဓေသားလောင်းလေးနဲ့ အကောင်ပေါက်လေးတွေကိုစားရတာ အလွန်သာရှိတယ်လို့ စားသုံး သူတွေက ဆိုပါတယ် ။ မျိုးအောင်ထားတဲ့ဘဲဥတွေရဲ့ အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီး ဘေးနားက အဖြူဖတ်တွေ ကို တော့သိပ်မစားကြပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အသက်နည်းနည်းကြီးလာရင် အရိုးနု တွေက စားရတာ နည်းနည်း မာလို့ဖြစ်ပါသတဲ့ ။
ဒါ ဖိလစ်ပိုင်မှာပါ ။ နိုင်ငံခြားသားတွေက သူတို့အစားအသောက်ခုံမင်မှုအတွက် သက်ရှိသတ္တ၀ါတွေကို စိမ်ခေါ် မှုပြုနေ ပါပြီ ။ ဘယ်လိုပဲ စားသောက်ဖို့အရသာရှိရှိ ဘယ်လိုပဲမွှေးကြိုင်နေပါသော သန္ဓေအောင်ပြီး အကောင်ပေါက် လုဆဲဆဲ ဘဲသန္ဓေသားတွေကိုစားသောက်တာဟာ အသက်ရှိနေတဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင် ကိုစားနေ သလိုပါပဲ ။ ဒီလုပ်ရပ်ကို တိရိစ္ဆာန်ညှင်းပန်း ကာကွယ်ရေးအသင်းတွေကလည်း ရှုံချထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့လမ်းကြားတွေမှာတော့ စည်ကားနေတုန်းပါပဲ ။
Source : Wikipedia/balut
Posted by သက်တန့်ချို at 5:17 PM 11 comments:
တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးရှိတယ် ။ သူ့ရဲ့ အာလူးခင်း ကို မြေတွေ တူးဆွပြီး စိုက်ပျိုးချင်ပေမယ့် သူ့မှာ ခွန်အားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက် သူအခက်တွေ့နေရတယ် ။ ဒါနဲ့ ဟိုးအဝေး တစ်နေရာမှာနေတဲ့ သူ့သားဆီ သူ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ လှမ်းပြီးအောက်ပါအတိုင်း အကူအ ညီတောင်း လိုက်တယ် ။
အဖေကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး ဒီနှစ်ထဲမှာ အာလူးခင်းကို မြေတူးဆွပြီး ပြန်စိုက်ပျိုးဖို့ အဖေမ တတ်နိုင် ဘူးသား အဖေအဲဒီလိုမလုပ်နိုင်တာကို သိပ်မုန်းတယ်သား ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မင်းအမေဟာ အပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးရင်းအချိန်ကုန်ဆုံးတရာကို အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တယ် ။ အဖေဟာ အာလူးခင်းကို ပြန်လည်မြေ တူးဆွဖို့ အခု အသက်ကြီးလွန်းနေပါပြီ ။ အကယ်၍ သားကူညီမယ်ဆိုရင်ဆတာ့ အဖေအ ဆင်ပြေပါပြီ သားအဖေ့ ဆီလာပြီး မြေတွေကို တူးဆွပေးနိုင်မလား ။
ချစ်တဲ့ --အဖေ ”
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဖိုးအိုဟာ ကြေးနန်းနဲ့ ပြန်စာတစ်ခုပြန်ရလိုက်တယ် ။
ဘုရားသခင်ကယ်ပေလို့သာပေါ့ အဖေ အဲဒီအာလူးခင်းကို မတူးဆွပါနဲ့ အဲဒီအာလူးခင်းအောက်မှာ သား လက်နက်ခဲယမ်းတွေမြုပ်ထားတယ်အဖေ
ချစ်တဲ့ -- သား ”
အဲဒီစာရပြီး နောက်တစ်နေ့ မနက်လေးနာရီမှာပဲ အဲဒီရွာကို တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ရဲအရာရှိတွေ မြို့နယ်တာ ၀န်ခံတွေရောက်လာပြီး အာလူးခင်းကြီ့းတစ်ခုလုံးကို တစ်နေရာမှ မကျန်အောင် တူးဆွပြီး လက်နှက်ခဲ ယမ်းတွေ ကို ရှာဖွေကြပါတော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် -- ဘာကိုမှရှာမတွေ့ခဲ့ပဲ ပြန်သွားကြပါတယ် ။
အဖိုးအိုဟာ နားမလည်နိုင်စွာနဲ့ သူ့သားဆီ ဘာတွေဖြစ်ပျက်တာလဲဆိုတာမေးဖို့ စာတစ်စောင်ရေးပို့လိုက်တယ် ။ သူ့သားကစာပြန်ပို့တယ် ။
အဖေအခု အာလူးခင်းထဲသွားပြီး အာလူးတွေစိုက်ပျိုးနိုင်ပါပြီ ဒါဟာ ကျွန်တော်အဝေးကနေ အဖေ့ကို အကောင်း ဆုံးကူညီလုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ
ချစ်တဲ့ --သား ”
ကိစ္စတော်တော်များများမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းမရှိပဲ လက်ရုံးအားကိုးဖို့ပဲ စဉ်းစားမိကြတယ် ။ တကယ်တော့ စဉ်းစား တွေးခေါ် အမြော်အမြင်ကြီးတတ်ခြင်းဟာလည်း ကိစ္စတော်တော်များများကို ခွန်အား မကုန်ဆုံးစေပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် မလုပ်ခင်မှာ သူဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ အရင်စဉ်းစားပါ သင် ဘယ်နေရာရောက်နေနေ သင်ဘာတွေပဲဖြစ်နေနေ အသိဥာဏ် စဉ်းစားတွေးခေါ် တတ်ခြင်း နဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် ။
Attitude and its importance … အားဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 3:48 PM2comments:
တရုတ်ပြည် Szechwan ပြည်နယ်မှာ Li Ching-yun ဆိုသူဟာ အံ့သြဖွယ်ရာ နှစ်ပေါင်း ရာကျော်နေ ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ တရုတ်ပြည်မှာ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအရ သူဟာ တကယ့်ကို မယုံနိုင်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ တယ် ။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် story အရတော့ ၁၇၃၆ မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၇ နှစ်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။
(ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ ပရော်ဖက်ဆာ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ record ထဲက လူနဲ့ Li ဟာ တစ်ယောက် တည်းဆို ရင်တော့ Li ဟာ တကယ်ပဲ ၂၅၆ နှစ်အသက်ရှည်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ယောက် စီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Li ဟာ ၁၉၇ နှစ်အသက်ရှည်ခဲ့သူဖြစ်ပါ့တယ် )
Li ရဲ့အကြောင်းကိုဒီထက်သိချင်ရင်တော့အောက်ပါလင့်မှာ ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:54 PM9comments:
Labels: ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ, အံသြဖွယ်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု
တစ်ခါတုန်းက သစ်ခုတ်သမားတစ်ဦးဟာ ကုန်သည်သူဌေးကြီးတစ်ဦးဆီမှာ အလုပ်ရဖို့အတွက် အကူအညီ သွားတောင်း တယ် ။ သစ်ခုတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူရသွားပါတယ် ။ သူ့လုပ်ခ လစာကလည်းအရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် သူ့အ တွက် အခြေအနေအားလုံးဟာ ကောင်းနေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သစ်ခုတ်သမားဟာသူအစွမ်းကုန် သူ့အလုပ် ကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။
သူ့ သူဌေးက သူ့ကို ပုဆိန်တစ်လက်ကိုပေးပြီး ခုတ်ရမယ့်နေရာတွေကိုလိုက်ပြတယ် ။ ပထမရက်မှာတော့ သစ်ခုတ် သမားဟာ အပင် ၁၅ ပင်ကိုခုတ်နိုင်ပါတယ် ။ “ ဂုဏ်ယူပါတယ် ” လို့ သူဌေးကပြောတယ် “ အလုပ်ကို ကြိုး စားပြီးလုပ်ပါ ”
သူ့သူဌေးရဲ့အားပေးစကားကြောင့် သူအားတတ်သွားပြီးနောက်ရက်မှာလည်း အလုပ်ကို ဒီထက်ပိုကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့်နောက်ရက်မှာ သူဟာ ၁၀ ပင်ပဲခုတ်နိုင်ခဲ့တယ် ။ တတိယရက်မှာလည်းသူဟာပိုပြီး ကြိုးစားခုတ်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ၇ ပင်ပဲခုတ်နိုင်ခဲ့တယ် ။ နေ့ရက်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ သူဟာ အပင်တွေကိုလျော့လျော့ပြီးပဲ ခုတ်နိုင် ခဲ့တယ် ။
“ ငါ့စွမ်းအားတွေကျဆင်းနေပြီ ” လို့ သစ်ခုတ်သမားကတွေးထင်လိုက်တယ် ။ ဒါနဲ့သူဟာ သူ့သူဌေးဆီကိုသွားပြီး သူ ဘာကြောင့် ဒီလို အပင်တွေ ကိုကြိုးစားခုတ်ပေမယ့်လည်းလျော့ပြီးပဲ ခုတ်နိုင်ရသလဲ ဆိုတာ နားမလည် တဲ့အကြောင်းမေးမြန်းခဲ့တယ် ။
“ သင်ဟာ ဘယ်အချိန်တုန်းက သင့်ပုဆိန်ကိုသွေးခဲ့သလဲ ” လို့ သူဌေးကမေးတယ် ။ “ သွေးရမယ် ဟုတ်လား ကျွန်တော် ဟာ အပင်တွေကို ခုတ်ဖို့အလုပ်များနေတဲ့အတွက် ပုဆိန်ကိုသွေးဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူး ” လို့ သစ် ခုတ်သ မားက ပြန်ဖြေရှင်း သူ့လိုအပ်ချက်ကို သူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားခဲ့တယ် ။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု Skills တွေကို ဘယ်တော့မှ Update မလုပ်မိကြ ဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ သင်ယူခဲ့တာ သင်ယူနေတာ တတ်ထားတာလေးတွေဟာ ဘ၀အ တွက်ပြည့်စုံ လုံလောက်နေပြီလို့ပဲ ထင်နေမိတတ်ကြတယ် ။ Good ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး Better ဆိုတဲ့စကားလုံးရအောင်ကြိုးစားရဦးမှာပါ ။ ကိုယ်တတ်မြောက်ထားတဲ့အရည်အသွေးတွေကို ထက်မြနေအောင် အချိန်တိုင်းသွေးထားမှသာ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Success ဆိုတဲ့ အောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Busy စာစုအား Vangeepuram ရေးသားသည်အား ဘာသာပြန်ခံစားသည် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 11:59 AM 1 comment:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:56 AM7comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:47 AM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 12:18 PM 10 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:49 AM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:42 AM2comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:37 AM5comments:
တရုတ်ပြည် Chongqing မြို့မှ အသက် ၂၇ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Wang Fang ဆိုသူအ မျိုးသမီးလေး ဟာ မွေးဖွားလာကတည်းက သူမ ခြေထောက်တွေဟာ အနောက်ဖက်ကို မျက်နှာမူနေတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ သူမဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေမှာ အခက်အခဲမရှိပဲ နေတတ်အောင် အတော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရတယ် ။ သူမအခက်အခဲကြုံနေရတာကတော့ သူမကို ကိုယ် လက်အဂါင်္ ချို့တဲ့သူ တစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်ဆံနေကြတာကိုပါပဲ ။ “ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေထက် အများကြီးပြေးနိုင်ပါတယ် ကျွန်မ မှာ မိသားစုစားသောက်ဆိုင်မှာ ပုံမှန်အလုပ်လည်းရှီပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်မကို Disabled (ကိုယ်လက် အဂါင်္ချို့ ယွင်းနေ သူ ) တစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး ” လို့ ဒီမိန်း ကလေး က ပြော ဆိုသွားပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 10:56 AM No comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:23 AM No comments:
တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက တရုတ်ပြည်မှာ ဒီလို ကျင်ငယ်ရေ (ဆီး ) ထဲမှာ ကြက်ဥပြုတ်တဲ့ ဓလေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကနေ ဆီးတွေ လိုက်စုယူပြီး အကောင်းဆုံးဆီးကတော့အသက် ၁၀ နှစ်အောက်က ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ဆီးက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသတဲ့ ။
စားဖိုမှူး Lu Ming ကတော့ “ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း သူတို့က ပုံးတွေထဲက သူတို့က ဆီးတွေ ပေါက်ချပါတယ် ကျွန်တော် တို့က လိုက်ပြီးသိမ်းဆည်းပါတယ် ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ် ။ Ming ပြောတာကတော့ ဒီလို ဆီးနဲ့ ပြုတ်ထား တဲ့ ဥတွေဟာ အရသာရှိပြီး ကျန်းမာစေတယ် သင့်ကို နိုးနိုးကြားကြားရှိစေပြီး စူးရှထက်မြက်စေ တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ Ming ဟာ အခုဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆီးနဲ့ပြုတ်တဲ့ ဥတွေကို နိုင်ငံအသီးသီးကို တင်ဖို့ဖို့ Project တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါပြီ ။
မကြာခင် ကျုပ်တို့ဆီတောင်ရောက်လာနိုင်တယ် ကိုယ့်လူတို့ရေ :P
Posted by သက်တန့်ချို at 11:06 AM9comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 4:21 PM No comments:
မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်တော့မယ့် ငါးမန်းတွေရဲ့ အန္တရာယ်
ခြေထောက်တွေမရှိပေမယ့် ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးတဲ့ သတ္တိခဲမလေး